आइसोलेसनका बिरामीमा लगातार संक्रमण पुष्टि भएपछि बढ्यो त्रास – Health Post Nepal
आइसोलेसनका बिरामीमा लगातार संक्रमण पुष्टि भएपछि बढ्यो त्रास
२०७७ असार ३ गते ११:०४
आइसियू सिल गरिएकै अस्पतालका दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि त्रास बढेको छ । त्रासका कारण प्रादेशिक अस्पताल मेचीमा हिजोदेखि नै सेवाग्राही आउने क्रम न्यून भएको छ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुरले अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको बताए। ‘चिकित्सकसहित २५ जना जनशक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेपछि सेवा प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘अस्पतालआसपासमा पनि त्रास थपिएको छ, असरलाई सामान्य बनाउन सबै लाग्नुपर्छ यो साझा दायित्व हो।’
अस्पतालको आइसोलेसनमा अहिले पनि पाँचजना बिरामी छन्। २५ बेडको आइसोलेसन रहेको प्रादेशिक अस्पताल मेचीमा भारतबाट आउने मानिस नरोकिएसम्म छ, सात जना मानिस नियमित हुने डा. ठाकुरको भनाइ छ।
अस्पतालले सेवा लिन आउनेलाई मास्क, सेनिटाइजर, भौतिक दूरी कायम गर्न र अनिवार्य आवश्यक सबै सुरक्षा सावधानी अपनाउन भनेको छ। अस्पतालको आइसियू बाहेक अन्य सेवा प्रभावित हुन नदिन प्रयास भए पनि जनशक्ति अभावमा समस्या सिर्जना भएको छ।
अस्पतालमा आइसियू सिल भएपछि तीन दिनअघिबाटै सेवा रोकिएको छ। अन्य रोगीले पनि सेवा नपाउने अवस्था आएको स्थानीय लक्ष्मी मिश्रले बताए । मेची प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेकामध्ये दुई जनाको सोमबार र मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
मंगलबार कचनकवल गाउँपालिका-५ का ३७ वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनी भारतको मुम्बईबाट सिधैं मेची अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जार आलमले बताए। उनीसहित कचनकवलमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय २८ पुगेको छ । जसमध्ये ९९ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
सोमबार अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका भद्रपुर नगरपालिका-८ का ३४ वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको थियो।
मेची क्याम्पको क्वारेन्टाइनमा बसेका ती व्यक्ति शनिबार मेची अस्पताल भर्ना भएका थिए। झापा आइसियुमा राखेर उपचार गरिएका ती व्यक्ति नै कोरोना संक्रमण पहिलो हुन्। झापामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ । जसमध्ये १ सय १३ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।